Torolàlana hanatsarana ny mailaka misokatra, tsindrio ary amin'ny taha fiovam-po | Martech Zone
Asabotsy 13 Febroary 2021 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Dinika iray ataoko isan-kerinandro miaraka amin'ny mpanjifa dia ny fomba mahakivy amin'ny fananganana sy fanohanana programa marketing amin'ny mailaka mahomby. Raha tsorina, rehefa mihalehibe ny lisitry ny marketing amin'ny mailakao, dia mitombo koa ny aretin'andoha. Toa nanary fanantenana ny hanomezana fomba fanao tsara indrindra ny mpanome tolotra internet ary manana algorithme moana izay manohy manasazy ireo mpandefa tsara.
Raha ny zava-misy dia nahita ny iray tamin'ireo mpiara-miasa tamiko tao amin'ny orinasa Yahoo! manakana ny 100% ny mailaka-na eo aza ny sehatra anaovany ny adiresy rehetra fenitra indostrialy sy fanao tsara indrindra voatanisa ao amin'ny Yahoo! postmaster. Ho fitsapana dia namindra ny fandefasana mailaka tamina adiresy IP vaovao izy ary nanomboka nandalo tsy nisy olana ny mailaka nataony. Atiny iray ihany, mpamandrika mitovy, adiresy IP hafa fotsiny. Indraindray heveriko fa ny ISP dia manakana fotsiny ny adiresy IP hahitako raha mamaly ny orinasa. Farafaharatsiny Yahoo! nolavina ireo mailaka, na izany aza… maro ny ISP hafa no mamindra azy ireo mankany amin'ny fampirimana tsy fantatra tsy fantatry ny mpandefa azy.
Mazava ho azy fa misy lesoka momba ny marketing mailaka azonao sorohina rehefa mamorona ny lisitrao sy ny atiny. Ary koa, misy fomba maromaro hanatsarana ny mailakao. Ity infographic, Hacks Marketing Optimization amin'ny mailaka & fandalinana tranga, avy amin'ny 99Firms antsipirian'ny fomba fanatsarana. Tsy mpankafy fatratra ny voambolana aho Hack… Hitako fa ireo fomba rehetra ireo dia mendrika hosedraina amin'ny programa mailakao.
Anisan'izany ny fomba fanatsarana ny mailaka
Fanatsarana ny andalana - Ny algorithm sy ny fitondran-tenan'ny mpamandrika dia nahatonga ny andalana ho ny lafiny fitsikerana indrindra amin'ny fahazoana mailaka miafina na tsindrio. Orinasa maro no mampiditra emoji ihany koa.
Lahatsoratra mialoha - Rehefa nosoloinay ny lahatsoratray praiminisitra nialoha ny lahatsoratra mavitrika namboarina avy amin'ny atin'ny mailaka, dia nahita fiakarana haingana teo amin'ny fametrahana boaty sy ny tahan'ny fisokafana izahay. Mamaky ny topi-maso ny olona - araraoty izany!
Anaran'ny mpandefa - 68% ny Amerikanina manokatra ny mailaka miorina amin'ny "From Name" hitany. Misolo tena tsara ny orinasanao ve ny avy amin'ny Anaranao? Mifanaraka amin'ny adiresy mailakao ve izany?
Segmentation - Ny fizarana ny lisitry ny varotra mailakao sy ny atiny fitarihana dia miteraka vokatra mahavariana nefa matetika no tsy jerena noho ny fahasarotana tafiditra. Mendrika ny hanaovana ezaka izany ary manohana azy ny ankamaroan'ny sehatra marketing amin'ny mailaka.
Personalization - Mihoatra ny [Inser First Name] ary manomeza antsipirihany amin'ny fampielezana mailakao izay miavaka amin'ny fampahalalana sy ny tantaran'ny fividianana. Ireo mpandefa mailaka dia nahita fiakarana fidiram-bola 92% ary indroa ny tahan'ny fiovam-po rehefa namboarina manokana ny mailaka.
Fanamboarana fiara sy fanandramana - Ny fotoana no zava-drehetra, noho izany ny fandraisana mailaka miorina amin'ny fanantenanao na ny fihetsiky ny mpanjifa dia ilaina mba hampandrosoana ny fifandraisana.
Bokotra sy antso hiasa - Raha sary ny mailakao ho toy ny pejy fipetrahana, misy fiantsoana-hetsika ve hitarika ny mpamandrika mankany amin'ny dingana manaraka amin'ny fidiranao amin'ny marikao? Raha tsy izany dia very fotoana lehibe ianao hanatsarana ny mailakao.
Images - Sahirana ny boaty boaty, ka mety tsy hisy ny mpamaky hamaky ny teny voaforona tsara napetrakao ao amin'ny mailakao. Ampitomboy ny firotsahana an-tsehatra sy tsindrio amin'ny alàlan'ny fanomezana sary mahasarika mba hisarihana ny mpamaky hamaky sy kitiho. Manampia GIF mihetsika mba hanampiana endrika hafa!
Video - Na dia maro aza ireo sehatra mailaka tsy manohana an-tsary ny horonan-tsary, dia afaka manome farafahakeliny fakan-tsary amin'ny bokotra filalaovana farafaharatsiny. Rehefa tsindrio ny mpamandrika ny bokotra filalaovana dia ento mankany amin'ny pejy izay manomboka ny horonan-tsary ho azy ireo!
Matahotra ny tsy hahita (FOMO) - ny famoronana fahatsapana fahamehana manodidina ny mailakao dia mety hampiakatra ny tahan'ny fisokafana sy ny tahan'ny fiovam-po. Tiako ny mampiditra sary mihetsika miisa miisa hitarika an-trano ilay anton-javatra fa misy fahataperana mifandraika amin'ilay tolotra.
fotoana - Adinoy ny fotoana tsara indrindra handefasana misy dikany. Andramo ny fotoana fandefasana hafa ny mailaka anao ary avy eo alefaso rehefa misy ny fiovana lehibe indrindra. Azonao atao mihitsy aza ny manasaraka sy manelingelina mandefa miorina amin'ny faritry ny fotoana.
Fahazoana andraikitra amin'ny finday - 42% amin'ny fisokafana mailaka rehetra dia miseho amin'ny finday. Efa nojerenao ve ny mailakao hahitanao ny endriny amin'ny finday? Mety ho gaga ianao, na hampihoron-koditra, amin'ny fiantraikan'ny mailaka finday tsy dia noforonina.
Votoatin'ny mailaka - Ny haavon'ny mpamaky sy ny halavan'ny kopia dia mety hisy fiatraikany amin'ny taha-tsindry sy ny tahan'ny fanovana.
Famolavolana mailaka - Miezaha mandefa mailaka an-tsoratra fotsiny fa tsy mailaka HTML hahitanao izay fahasamihafana valiny? Na dia mety ho tsara tarehy aza ireo mailaka HTML, dia mety tsy hisarika ny sain'ny olona ny mailaka an-tsoratra!
Ity ny sary feno, miaraka amin'ny zava-misy sy antontan'isa mahafinaritra manerana!
Tags: fotoana tsara indrindra handefasanaautomation emailbokotra mailakaantso an-tariby amin'ny mailakaVotoatin'ny mailakafandefasana mailakasary mailakaprograma marketing amin'ny mailakafanatsarana ny mailakapersonalization mailakampampialoha mailakafizarana mailakafotoana fandefasana mailakamandefa mailakamailaka an-tsoratramailaka mitarikahoronantsary mailakatahotra ny tsy hitafomoavy amin'ny anaranymailaka htmlNewsletterOptimizationmailaka an-tsoratra tsotralahatsoratra mialohaanaran'ny mpandefaandalana foto-kevitrafitiliana
SEOReseller: White Label SEO Platform, Tatitra ary Serivisy ho an'ny masoivoho